Ulwaluko-Rabbi Michael Avraham
Iimpendulo > Udidi: Ifilosofi > Ulwaluko
unyana Ubuzwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Uthini umbono wakho kwiingxoxo ezichasene nolwaluko? Ukuba umntwana ngumntu omele abe nokukhetha ukuba enze okanye angenzi izenzo ezingenakulungiseka emzimbeni wakhe, ukuba umanyano lubeka emngciphekweni umntwana kwaye ngokubanzi kufana nokusika i-ingono kumantombazana (ngokuphathelele ingxabano yezempilo)
mikyab Abasebenzi Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Iingxoxo ezinjalo zinokuchasa indlela yokutya, imfundo nezinye izinto ezinjalo. Akukho kusinda kwimpembelelo yabazali kubomi bomntwana. Ngoko nokuba ibango lichanekile ngokwethiyori ayisebenzi. Abazali bafanele benze konke okusemandleni abo ngokokholo lwabo kuye. Ngokukodwa, xa ekhulile, isigqibo sokwenza umanyano siya kumenzakalisa kwaye senze kube nzima kuye.
unyana Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Kodwa yinkqubo engenakuguqulwa echasene nokutya kunye nemikhwa yemfundo
mikyab123 Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Ayonyani. Yonke into ayinakuguqulwa. Umzekelo, imfundo iyisa kwindawo ekwanefuthe kwisigqibo sokuba sitshintshe indlela.
UGqr. Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Kwimfundo kunokutshiwo ukuba iyabuyiswa kodwa isondlo ngokuqinisekileyo asiyi kuguqulwa.
UDaniyeli Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Kwakhona ukungaluki kwisithuba seentsuku ezisi-8 sisigqibo esingenakuguqulwa. Akukho mntu uya kukwazi ukubuyisela kulo mntwana iintsuku zobuntwana awayengaphandle komnqophiso.
A Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Kutheni le nto ikuphela komcimbi okhoyo ukusuka ekubalekeni kukaRabhi ukuya kumzimba walo mbandela iimpendulo zibuthathaka kwaye azikho serious. Ngandlel’ ithile ikhumbuza i-apologetics ye-ultra-Orthodox kwixesha lethu.
ד Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
A, ngokwenene. Kodwa qaphela ukuba wabhala "nangona ithiyori ichanekile" kwaye emva koko wathi akukho enye inketho kwaye yonke into ayinakuguqulwa, njl. Kodwa eyona mpendulo yeyokuba lo myalelo wolwaluko ulodlula ixabiso lokuzimela komntwana ongenangqondo.
ר. Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Ngokombono wam, impendulo eneneni yomelele kwaye ichanekile kwaye ayiphepheki.
Iphayina Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo
Ukulandela ukusuka kwesi sihloko, ndicinge ukuba ndongeza ukuba kukho ingxaki apha phakathi kwexabiso lokuzimela komntu kubantwana bakhe kunye nobukhulu bomonakalo emntwaneni. Ukuba ibiyinto enkulu kakhulu yokwenzakala (njengokunqunyulwa komlenze okanye ingalo) bekuya kubakho indawo yokusebenzisa ukunyanzeliswa ukuze kuthintelwe lo mkhwa ngabo bangakholelwayo kuwo (njengokunyanzela umntu ukuba angazibulali nangona eye wazenza. ukuzimela ngomzimba wakhe). Kodwa kwimeko yolwaluko, umonakalo mncinane xa uthelekiswa nexabiso lokuzimela geqe kwabazali libonakala liligqwesa (kanye njengokuba umntu enganyanzelwanga ukuba ayeke ukutshaya nangona ezenzakalisa). Ngoko ke, kwanabo bangakukholelwayo ukubaluleka kolwaluko, abafanele bangabahluthi abo bakholwayo kulo. Okona kuninzi, abantu banokufundiswa ngoxolo ngokuchasene nezinto ezibizwa ngokuba "zobuqhetseba".
uYonatan Shalom eNachion Vula Ngokusweleka kongasekhoyo uProf David Halvani Weiss (uluhlu lwama-485)
Yishai Vula Impendulo kumbuzo malunga nezifundo